Lomano Analamanga :: Nanjakazaka ny Managing sy Saint-Michel • AoRaha
Lomano Analamanga Nanjakazaka ny Managing sy Saint-Michel
Nahoron’ireo klioba goavana roa, Managing sy Saint-Michel, ny anaram-boninahitra tompondakan’Analamanga taranja lomano, ho an’ireo katitakely, notanterahina teny amin’ny Lomano Center Avarabohitra Itaosy, ny sabotsy lasa teo.
Medaly valo ambin’ny folo, ka ny valo tamin’ireo no volamena, no azon’ireo mpilomanon’ny klioba Managing. Medaly volafotsy efatra sy alimo dimy kosa no nanampy an’izany ho an’ity klioba ity. Medaly enina ambin’ny folo, ka volamena ny fito sy volafotsy ny efatra ary alimo ny dimy, kosa no azon’ireo mpilomano avy ao amin’ny klioban’ny Saint-Michel.
Isan’ny nampisongadina an’ireto klioba roa ireto ny nahavitan’izy ireo pao-droa teo amin’ny lomano mifampitohy ka nanjaka ny Saint-Michel teo amin’ny 4×50 m lomano tsotra ho an’ny sokajy avenirs sy poussins mitambatra sy ny 4×100 m lomano tsotra ho an’ny fitambaran’ireo sokajy rehetra (avenirs, poussins, benjamins ary ireo hafa). Ny 4×100 m karazan-domano efatra vehivavy sy 4×100 m lomano tsotra kosa no azon’ny Managing.
Lomano Analamanga :: Nanjakazaka ny Managing sy Saint-Michel - ewa.mg dit :
[…] Lomano Analamanga :: Nanjakazaka ny Managing sy Saint-Michel est apparu en premier sur […]
Volley -ball – «CCZ7» :: Tompondakan’i Afrika faritra fahafito ny zandarimariam-pirenena